Ogilwe u-MMM uxwayisa ngomkhankaso omusha namaqhinga amasha | News24
Ogilwe u-MMM uxwayisa ngomkhankaso omusha namaqhinga amasha
Cape Town – Isisulu esigilwe yibhanoyi lodumo, u-MMM, sesikhiphe isexwayiso ngokuthi leli bhanoyi elisebenza nge-internet likhula ngamandla njengoba selibuye kabusha eNingizimu Afrika, kanti labo abalahlekelwe yizigidi zamarandi bahlukunyezwa ngokwamazwi ngokukhuluma kwabo.
U-MMM wavala ngonyaka odlule ngemuva kokuhluleka kwabantu ababewusebenzisa ukunikeza amaphoyinti atholwa ngokunikela ngemali labo abasemazingeni aphansi ebhanoyi. Akucaci ukuthi ingakanani imali abantu baseNingizimu Afrika eyabalahlekela kuleli bhanoyi, njengoba abanye benamahloni kakhulu ukuthi baphumele obala. Phezu kwalokho, azikho izinyathelo zomthetho abangazithathela leli bhanoyi.
Ngesikhathi abantu sebeyeka ukunikela ngemali kwase kwaba nesomiso samaphoyinti ngonyaka odlule, u-MMM wavele walumisa lolu hlelo wase wabiza amaphoyinti ayesetholakele ngokuthi ama-“Old Mavros”. Ube usuwethula kabusha u-MMM ngonyaka ka-2017, nosuyibhanoyi elisha ceke okuzosetshenzwa ngalo.
OLUNYE UDABA: Itwetwe ngokufika kuka-MMM emazweni angaphandle
Ama-Old Mavros uyakwazi ukuwabuyisa ngokuthi unikezele imali eningi kwabanye abasohlelweni oselavalwa. Ngo-R100 ngamunye owunikezela omunye kumele ubuyelwe u-R10 wamaphoyinti ngokwa-MMM omdala.
Lolu hlelo aluwenzi umqondo futhi alusebenzi, ngokusho kwesisulu sika-MMM omdala. Igama lalesi sisuslu liyaziwa yiFin24 kanti ligodliwe ngezizathu zokuphepha.
Lo utshele iFin24 ukuthi usevele wakhetha ukuphonsa ithawula ngokuthi abuyelwe yimali yakhe engu-R65 000 ngemuva kokuba ezifundele kwezakhe ukuthi kuphelile ngaleli bhanoyi. Uthi abanye abangani balahlekelwe yimali engaphezu kuka-R100 000.
“Basitshela ukuthi sizobuyelwa imali yethu ezinyangeni ezintathu, base bathi yizinyanga eziyisithupha kanti manje sekuphele unyaka nezinyanga ezine,” usho kanje. “Ngiyayivala [i-account] yaleyo mali. Wonke ama-Old Mavros alahlekile.”
Uthi manje kunabantu abangena indlu nendlu bedayisa u-MMM nathi bafika ebhizinisini lakhe befuna abantu abasha. Uthi bamandla kakhulu ekukhangiseni ngaleli bhanoyi lodumo.
“Kuzokwenzakalani uma ngabe liphahlazeka futhi? Ngikhathele manje ukuthi abantu benziwe izilima.”